Paradox - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > fohy fisainana > mifanohitra
I Paoly dia mamaritra ny misterin’ny finoana (na ny toe-panahy araka an’Andriamanitra) ho toy ny zava-miafina ambara ao ambadiky ny zava-drehetra – ny maha-isan’i Jesosy Kristy. In 1. Timoty 3,16 Nanoratra toy izao i Paoly: Ary lehibe, araka izay tsy maintsy ekeny, ny zava-miafina ny amin’ny finoana, dia aharihary ao amin’ny nofo, nohamarinina tao amin’ny Fanahy, niseho tamin’ny anjely, notorina tamin’ny jentilisa, ninoana teo amin’izao tontolo izao, noraisina tamin’ny voninahitra.
Jesosy Kristy, Andriamanitra tao amin’ny nofo, dia azo antsoina hoe fifanoherana lehibe indrindra (=miharihary mifanohitra) amin’ny finoana kristiana. Ary tsy mahagaga raha io paradox io - ny Mpamorona dia lasa ampahany amin'ny zavaboary - dia lasa loharanon'ny lisitra lavabe misy fifanoherana sy fanesoana manodidina ny finoantsika kristiana.
Ny famonjena dia ny tsy fahitana: ny olombelona mpanota dia voamarina ao amin'i Kristy tsy misy ota. Ary na dia mbola manota tahaka ny kristiana aza isika, Andriamanitra dia mahita antsika ho an'ny Jesosy fotsiny. Mpanota isika nefa tsy nanota.
Nanoratra ny apostoly Petera ao amin’ny 2. Petrus 1,3-4: Ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an’Andriamanitra dia nanome antsika ny herin’Andriamanitra tamin’ny fahalalana an’ilay niantso antsika tamin’ny voninahiny sy ny heriny. Amin'ny alalan'ireo no anomezana antsika ny teny fikasana tsara indrindra sady lehibe indrindra, mba hahazoanareo anjara amin'ny fomban'Andriamanitra, izay nandosiranareo ny filan'ny nofon'izao tontolo izao.
Ny sasany amin'ireo fanoharana amin'ny asan'i Jesosy miavaka eto an-tany mba hahasoa ny olombelona rehetra:
Nanomboka ny ministerany Jesosy raha noana izy fa izy no mofon'aina.
Namarana ny asany teto an-tany i Jesosy tamin'ny hetaheta, nefa izy no rano velona.
Reraka i Jesosy nefa isika no fitsaharana.
Nandoa hetra ho an'ny emperora i Jesosy, nefa izy no mpanjaka mendrika.
Nitomany i Jesosy nefa namafa ny ranonay.
Namidy amam-bolafotsy 30 i Jesosy, nefa izy kosa nandoa ny vidin'ny fanavotana an'izao tontolo izao.
Jesosy dia nitarika ho an'ny mpiandry toy ny zanak'ondry, fa izy kosa no mpiandry tsara.
Jesosy dia maty ary tamin'izany fotoana izany dia nanimba ny herin'ny fahafatesana.
Ho an'ny Kristiana koa, ny fiainana dia tsy mitovy amin'ny fomba maro:
Hitantsika ny zavatra tsy hita maso.
Mandresy amin'ny alalan'ny fanolorantena isika.
Avy amin'ny fanompoana izahay.
Mahita fiadanana isika amin'ny alalàn'ny ziogan'i Jesosy.
Lehibe indrindra isika raha manetry tena indrindra.
Hendry indrindra isika raha adala noho ny amin'i Kristy.
Lasa matanjaka indrindra isika rehefa marefo.
Mahita fiainana amin'ny famoizana ny aintsika noho ny amin'i Kristy isika.
Nanoratra i Paoly tao 1. Korintiana 2,9-12: Fa tonga tokoa izany, araka ny voasoratra hoe: Izay tsy mbola hitan’ny maso, tsy mbola ren’ny sofina, ary izay tsy niditra tao am-pon’olona, ​​dia izay namboarin’Andriamanitra ho an’izay tia Azy. Fa Andriamanitra no nanambara izany tamintsika tamin’ny Fanahiny; fa ny fanahy dia mandinika ny zava-drehetra, ao anatin’izany ny halalin’ny Andriamanitra. Fa iza no mahalala izay ao anatin'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany? Koa tsy misy mahalala izay ao amin’Andriamanitra afa-tsy ny Fanahin’Andriamanitra ihany. Fa isika tsy nandray ny fanahin’izao tontolo izao, fa ny fanahin’Andriamanitra, mba hahalalantsika izay nomen’Andriamanitra antsika.
Eny tokoa, lehibe ny tsiambaratelon'ny finoana. Tamin'ny alàlan'ny Soratra Masina, nanambara ny Tenany tamintsika Andriamanitra tokana - Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ary amin'ny alàlan'ny Zanaka, izay tonga iray amintsika hampihavana antsika amin'ny Ray izay tia antsika, isika dia tsy miangona amin'ny Ray ihany, fa eo amin'ny iray hafa.